नेपाली नेताको चरित्र चित्रणः कहाँ चुके हाम्रा नेता ?
काठमाडौं (पहिचान) कार्तिक २० – नेतृत्वको विषयमा चर्चा गर्दा नेता र नेतृत्वमा के फरक छ, नेतृत्व भनेको के हो, नेतृत्व केका लागि भन्ने जस्ता प्रश्न आउँछन् । झट्ट सुन्दा हामी नेतृत्व भनेर राजनीतिक नेतालाई मात्रै बुझ्छौं । हाम्रो चिन्तन र सोचाइ राजनीतिक नेतृत्वकै वरिपरि घुमिरहेको पाउँछौं । राजनीतिक नेताहरूले नीति बनाउने भएकाले उनीहरूको ठूलो महत्व छ । त्यो नीतिले बहुसंख्यक जनतालाई प्रभाव पार्छ ।
तर, त्यसोभए राजनीतिक नेतृत्व मात्रै नेतृत्व हो त ? पक्कै होइन । यो सापेक्ष विषय हो । कुनै घरमा बाबुले, कुनै घरमा आमाले, कसैले घरको ज्येष्ठ सदस्य वा कुनै घरमा सामूहिक निर्णय लिने चलन पनि हुन्छ ।
नेताको विम्वका रुपमा वीपी कोइराला, पुष्पलाल, मदन भण्डारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई आदिको नाम अगाडि आउँछ । तर, कुनै पनि नामले हामीलाई रोमाञ्चित बनाउन भने सक्दैन । कुनै समयमा बनायो होला । तर, सधैं बनाइरहन सक्दो रहेन छ । सबल र सक्षम भनिएको नेतृत्व पनि हेर्दा–हेर्दै धरासयी हुँदो रहेछ । यसबाट नेतृत्व भन्ने कुरा पनि सधैं रहिरहने होइन भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ ।
त्यसैले नेतृत्व के हो भन्ने विषयमा आफैंमा त्यति सरल छैन । विश्वविद्यालयहरूमा पनि नेतृत्वको विषयमा पढाइन्छ । तर, नेतृत्व र नेताका बारेमा बुझ्न निकै कठिन भइरहेको छ ।
भारतकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा नेहरूको पनि अचम्मको करिश्मा थियो । उनी पढे लेखेका थिए, धेरै वर्ष जेल बसे । उनले आफ्नो समयमा पनि धेरै मान्छेलाई प्रभावित गर्न सके । उनको नामै काफी छ ।
समानताको सिद्धान्तअनुसार हामी सबै बराबर छौं । मौका पाउने हो भने तपाई हामी सबै नेता बन्न सक्छौं । तर, नेता बनिसकेपछि के बिर्सन्छौं भने हामी नियम कानूनअनुसार गर्नुपर्ने काम गर्नका निमित्त आएको हुँ । म निमित्त हुँ भन्ने नै बिर्सन्छौं । समस्या यहीँनिर छ ।
पश्चिमा देशहरूमा आफू जोगिन सकियो भने अरुलाई जोगाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, हामीले यस्तो परिस्थितिमा के सुनेका छौं भने त्यो कस्तो बहादुर, कस्तो नेतृत्व गर्‍याे त्यसले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर अरुलाई जोगायो ।
नेतृत्व सुन्ने, समायनुकुल र आफैंले बनाएको नियम कानूनमा बस्ने हुनुपर्‍याे । यो नियम त मैले अरुलाई बनाएको हो, मलाई लाग्दैन भन्नु नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । तानाशाही जन्मिने पनि यही प्रवृत्तिबाट हो ।
हामीकहाँ नेतृत्वको सांस्कृतिक फ्रेमवर्क नै बनेको छैन । माथि चर्चा गरेजस्तो पहिलो दुईवटा आधारमै छन् । अहिलेको नेतृत्वले यो सारा परिवर्तन जनता लडेर आएको होइन, मैले दिलाएको हो भन्ने छ । नेतृत्वमा हामीले दिने हो भन्ने सोच छ । तपाई र मेरो अधिकार उसले दिने होइन नि ।
सरकारमा गएपछि उसलाई ३३ प्रतिशतको प्रावधान लागु नहुने, दुई हिताई भएपछि संसदीय प्रक्रिया मान्नु नपर्ने भनेपछि नेतृत्व त बेइमान भयो नि । निर्वाचन, जातजाति, आरक्षणको सन्दर्भमा पनि यस्तै छ ।
नेतृत्व कहाँबाट जन्मिन्छ, आफ्नो कुरा भयो । तर, व्यवहारमा नेतृत्व ढुलमुले छ । नेता नेतृत्वको फ्रेमवर्कमा बाँधिन चाहँदैन । लोकतन्त्रमा नेतृत्व त सामूहिक हुन्छ नि । भोलि जनताले चुनौति दिन सक्छ । आवाज उठाउन सक्छ, सडकमा ढुंगा हान्न जान सक्छ ।
नेताहरूलाई नेतृत्व मैले वंशागतरुपमा लिएर आएको हुँ, दैवी परम्पराबाट लिएर आएको हुँ भन्ने लाग्न थाल्यो । पार्टी बनाएका कारण, जेल बसेका कारण, ऐतिहासिकताका कारणले नेता बने । भविश्यलाई डोर्‍याउनका लागि, सम्झिन योग्य काम गर्नका लागि नेता बनेको हुँ भन्ने बिर्सेपछि त गाह्रो भयो नि ।
समाजको कामना पनि त्यस्तै छ । फलाना हेडमास्टर राम्रो थियो । किनकि उनी कडा थिए । विद्यार्थीलाई लौरीले हिर्काउँथे भन्छौं । आजको जमाना त लौरी हिर्काउने होइन । हिजो यस्तो नेतृत्व आवश्यक थियो होला । आज त न्याय, समानताको समय हो । यस्तो समयको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा यथेष्ठ चर्चा, परिचर्चा, विचार विमर्श भएको छैन । जसले नेतृत्व गर्छ, उनीहरूका बीचमा पनि यो विषयमा छलफल नभएको अवस्था छ ।
नेतृत्व भनेको अनुशरण गर्ने, सिक्ने, नक्कल गर्ने विषय पनि हो रहेछ । अहिलेको नेतृत्वबाट दोस्रो पुस्ताले हामी चतुर हुनुपर्छ भन्ने सिकेछौं ।
नेता धनी हुनु, ठूलो घर बनाउनु समस्या होइन । हिजो चप्पल लगाएको नेता गाडीमा हिँड्यो भनेर रोइलो गर्न पनि आवश्यक देख्दिनँ । तर, उसको आयआर्जनको स्रोत पारदर्शी हुनुपर्छ । भारतमा नेहरुलाई त कसैले प्रश्न उठाउन सकेन नि ।
म ट्रेड युनियनमै काम गरेको मान्छे हुँ । मजदुरले फ्याक्ट्री बन्द गर्छन् । तर, खोल्नका लागि । सँधै बन्द होस् भन्ने उनीहरू पनि चाहँदैनन् । यस्तो संघर्षलाई जसरी रोमान्टिसाइज्ड गरिन्छ, त्यति सजिलो हुँदैन । संघर्ष गर्नका लागि समय, साधन स्रोत पनि चाहिन्छ ।
समाजसँग नजोडिएको नेतृत्व
समाजमा सकारात्मक परिवर्तन पनि नभएको होइन । तर, नेतृत्वले त्यसतर्फ ध्यान नदिँदा त्यो परिवर्तनले विकृत रुप धारण गरेको छ । व्यक्तिगत केहीलाई नोकरी लगाउने कुरा गर्छन् । तर, सामूहिक रुपमा युवालाई नोकरी दिने कुरै गर्दैनन् । गाउँको एक/दुई जनालाई नोकरी दिने काम नेतृत्वको होइन । उसले सबैलाई नोकरी दिने नीति बनाउने हो । देशभरिकै बेरोजगारी समस्याको विषयमा बोल्नुपर्‍याे । घोषणापत्रमा त सबैलाई रोजगारीको व्यवस्था हुन्छ भनेर लेखेकै छ । रोजगारी नीतिमा छलफल भएको खै ?
सामाजिक आन्दोलन कमजोर भएर गएका छन् । जब कि यस्तो बेलामा सामाजिक आन्दोलनको ठूलो आवश्यकता देखिन्छ । सामुदायिक प्रयत्नहरूको खाँचो छ । स्थानीय समूह, समुदायलाई पनि दशैंका बेला एउटा खसी, दुईवटा भाले बली दिएर हुन्छ कि चारजनालाई विदेश पठाएर हुन्छ, उनीहरूलाई किनिसकेको अवस्था छ ।
युवा नेतृत्वबाट पनि आश गर्न सकिने आधार देखिएको छैन । टाठाबाठा, जान्ने सुन्ने छन् । तर, उनीहरू पनि एउटा न एउटा पुराना नेताको फेरो समातेर हिँडेका छन् । दाइको अनुकम्पबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि त तलबाटै दवाब सिर्जना गरेर आउनुपर्ने हो । नेतृत्व वैधानिक प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ । अहिले दास मानसिकता हाबी छ । भित्रैबाट झिल्को जगाउने खालको छैन । सेल्फ करेक्टिङ अर्गनाइजेसन नै अगाडि बढ्न सक्छ ।
हरि शर्मा बिश्लेषक हुन्
(यो सामग्री हामीले अनलाइनखवरबाट लिएका हौ ।)